wararka maanta-arlaadii.net » 2018 » April » 16
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qeyb galay shir-madaxeedka dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta oo ka dhacay magaalada Al-Dahraan ee Boqortooyada Sucuudiga ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha ayaa intii uu...
Dabley hubaysan ayaa xaafadda Oodweyne ee dhabarka dambe Wasaaradda gaashaandhigga Somaliya waxa ay ku toogteen Macalin wax ka dhigaayay mid ka mid ah Jaamacadaha ku yaal Magaalada Muqdisho. Macalinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Ismaaciil Cadow Nuur, wuxuuna wax ka...
Nin ka tirsan ciidamada Maamulka Jubbaland ayaa habeen hore wuxuu Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee Jubbaland ku dilay xaaskiisa, sida ay xaqiijiyeen ehelada gabadha dilka loo gaystay. Gabadha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Muxibo Maxamed Xuseen, waxayna aheyd 19 jir...
Ciidamo ka tirsan Millitariga Somaliya oo watay gaari nuuca dagaalka ah gaar ahaan Cabdi Bile ayaa caawa waxaa lagu weeraray nawaaxiga Warshadda Caanaha ee Magaalada Muqdisho caasimadda Somaliya. Rag hubeysan ayaa Ciidamadan oo halkaasi marayay waxa ay ku rideen qoriga 7-ka,...